Ndiyinyanzela njani ukuba ndicime ukungavisisani? - Iingxaki
Eyona > Iingxaki > Ingxabano ayizukukhupha - ireferensi ebanzi
Ingxabano ayizukukhupha - ireferensi ebanzi
Ndiyinyanzela njani ukuba ndicime ukungavisisani?
Vula ukuqala> Useto> Inkqubo> IiNkqubo kunye neeMpawu.
Njonga iIngxabanoCofaCimakwaye uqinisekise ukususwa.
Ewe, intsholongwane engathandekiyo ye-System32 ekhoyo kuzo zonke ii-PCs ze-Windows, hayi, ewe, sonke siyivile ihlaya lokuba i-system32 yintsholongwane ekufuneka icinyiwe, kodwa eneneni sisikhombisi esibalulekileyo seWindows Kodwa kuya kwenzeka ntoni xa ucima Inkqubo32? Ngokucacileyo iiWindows azizukuphinda ziqale, kodwa ngaba ungayibuyisela ngandlela thile? Ngaba ungakanani umonakalo onokuba ngenene ukuba uyayisusa kwaye usaqhuba iiWindows? Kwakuza kwenzeka ntoni? Ewe, yile nto siza kuyenza kweli nqaku, siza kwenza umboniso wobomi bokwenyani wento enokwenzeka ukuba ucime inkqubo32 kwikhompyuter yakho, kwaye ngokukhawuleza, ngaphambi kokuba senze, ukuze ube nomxholo othile Ngoba? Asingeni ngqo kwi-system32 kwaye kutheni ibalulekile kuba zininzi iikhowudi zeWindows.
Ke yintoni eyona nto inkulu ngale? Njengoko besenditshilo ngaphambili, iNkqubo 32 inetoni yeefayile ezibalulekileyo ezingabalulekanga kuphela kwiWindows ngokwayo, kodwa nakwiinkqubo zomntu wesithathu ezisebenza kwiWindows. Oku kubandakanya iilayibrari ekwabelwana ngazo ezinjengeDynamic Link Libraries okanye ii-Hardware DLLs kunye nezinye ezakhelwe-ngaphakathi kwiinkqubo eziphambili ze-Windows izinto ezinje nge-Task Manager okanye i-Notepad allExist kwifolda ye-32 kwaye kukho enye ifolda efanayo kulawulo lweWindows olubizwa ngokuba yiSysWow64 kunye no-64 yee-Windows 32-bit kwi-Windows 64-bit kwaye ngokusisiseko oku kunenani lamathala eencwadi angama-32-bit kwaye enjalo, ngelixa inkqubo 32 ineelayibrari ezingama-64. Ke ewe, ukuba iNkqubo 32 inezinto ezingama-64 kwaye i-SysWOW64 inezinto ezingama-32 azenzi ngqondo, ngokusisiseko kukungqinelana ngasemva kubaphuhlisi abangacwangcisanga ngaphambili, kodwa ngokungeyomfuneko ukuba bathi izinto kwinkqubo 32 ifolda isetyenziswa phantse yonke into, ke kuya kuba kuhle ukuyicima intlekele enkulu kufakelo lweWindows.
Ngoku ngesiqhelo ngekhe ucime inkqubo eneefolda ezingama-32. Ikhuselwe ziimvume. Ke nokuba uyazama ukuba ithi imvume yokwenza oko ngengozi ayinakwenzeka kwaye nokuba uyazama, ngaphandle kokuba ubusazi ukuba usebenza kanjani kwezi zinto, awunangxaki, ususa ngempazamo inkqubo32, kodwa kule meko sifuna ngokwenene cima inkqubo32.
Ke ndiza kudlala ngeenxa zonke neemvume kwaye ndizinike ufikelelo ukuze ndikwazi ukuyicima ngoku. Andizukubonisa ukuba ungayenza njani kwaye uyenze kanjani yonke le nto kuba inzima kwaye andifuni ukuba uyazi ukuba ungabenza njani abahlobo bakho ngokonakalisa ikhompyuter yakho ukutshabalalisa ufakelo oluqhelekileyo lwekhompyuter, thina ngoku kwiifestile kwaye ndinelungelo lokucima zonke iifayile kwaye kusekho ezinye iindlela ezikhuselekileyo zokubeka indawo. Umzekelo, ngekhe ndikwazi ukucima yonke into esetyenziswayo kwaye ndibone ingathi kuba sisikhombisi senkqubo ezinye izinto zisetyenzisiwe kodwa kusekho izinto ezininzi.
Kubalulekile ukuba ndicime. Ke sizokonwaba kakhulu apha. Cima yonke into endinokuyenza xa ndizama ukucima yonke into ngobuninzi.
Luhlobo lweebhloko kwaye alususi kwanto. Ke ndiza kuzama ukucima amacandelo amakhulu ngaxeshanye kwaye emva koko ungabona ukuba ndicima iifolda kunye nee-DLL zongezwa kudoti kwaye xa ujonga phaya ungabona lonke iqela lezinto zisuswa nyani , Ndiphakamisa kangangoko kunokwenzeka kwi-swath enkulu kwaye ndiyicime kubonakala ngathi mandivumele ndicime uninzi lwee-DLL kwaye zinjalo, kodwa iifolda azindivumeli ndicime nantoni na kuyo kuba ukuba kukho into engaphakathi kuluhlobo olungaqhelekanga, mhlawumbi uninzi lweemvume ezongezelelweyo kunye nokukhuselwa kwezokhuseleko zikhethekile kule folda Kodwa kubonakala ngathi ndisakwazi ukucima i-chunk elungileyo kwaye ndiqinisekisa ukuba oku kuyaphula yonke into. Ke ngoku sele ndicime izinto ezininzi kwaye inkqubo sele isebenza ngokungathandekiyo.
Uyabona ukuba andikwazi ukuqala izinto ezininzi xa ndizama ukucofa izinto. Ungaze ukhathalele, iyavela imenyu kwaye ayinanto kwaphela okanye iyaphambuka, imiyalezo yemposiso engahleliyo ayilayishi ndawo yonke, nokuba ndithe ndazama ukuqala kwakhona ngokunqakraza kwimenyu yokuqala, iqhosha lamandla alibonisi nto. Ke ngaphandle kokuqalisa kwakhona, inkqubo yaphukile.
Awunakho ukubona umphathi womsebenzi eqala. Okwangoku yonke into iyatshatyalaliswa, kodwa ubuncinci iiWindows zisasebenza. Into endizakuyenza kukuqala kwakhona umatshini obonakalayo kwaye ubone ukuba kwenzeka ntoni emva koko.
Impazamo yeXbox 0x80a4001a
Ndiyiqala kwakhona ngoku kwaye singayilinda ukuba ilayishe kwaye ungabona kakuhle ukuba izama ukutshintshela kulungiso oluzenzekelayo kwangoko, iyazi kwangoko ukuba kukho into engalunganga kwaye iiwindows azizange ziqale kwaye ithi yeyakho ikhompyuter kwaye wenze umonakalo omkhulu. Ngoku jonga, ithi uLungiso oluzenzekelayo alunakulungisa iPC yakho, kungoko kuya kufuneka siphinde sisebenzise ngokupheleleyo iWindows okwangoku ukuze le khomputha isebenze kwakhona, ukuba yikhompyuter yokwenyani, jonga ukuba yintoni ekhoyo ukuze sikwazi Cofa usete kwakhona le PC kwaye ubone ukuba kwenzeka ntoni. Susa yonke into kwaye ewe ewe, nokuba ayisebenzi loo nto, ithe bekukho ingxaki yokusetha kwakhona iPC yakho ukuze uninzi lwezinto zokubuyisa zihambile kwaye singacofa nakwezinye iindlela onokukhetha kuzo kule Windows yokusombulula ingxaki. kwaye akukho nto apha eza kuyisombulula.
Ngokwenyani oku kufakelwa kweWindows kutshatyalalisiwe Ikhompyuter ngokwayo ngokucacileyo ayinako ukuphinda ufake iWindows kuyo kodwa iya kuba yintlungu, kucace gca kulo mboniso. Siyabona ukuba ayothusi. Kwenzeka ntoni xa ucima inkqubo32 yofakelo lweWindows yakho yonakele de ubuyisele ngokupheleleyo iWindows kwaye ngekhe wenze nto ngayo nangokubuyiselwa okwakhelweyo.
Ayizukukwazi ukuyilungisa Ke ngoku kwixa elizayo ukuba ukhe wazama ukucima i-system32 kunye nabahlobo kuba ngekhe ubenakho ukuzilungisa ngokwakho kwaye bayakucaphuka xa kufuneka bethathe kwivenkile yekhompyuter yokufaka kwakhona iiWindows kunye nokufaka yonke idatha yazo, ayisiyonto iluncedo kwaphela. Ngapha koko, ngethemba ukuba eli nqaku alikhange lide kakhulu. Andicingi njalo.
Ndazise ukuba ucinga ntoni kwicandelo lamagqabaza. Ngaba wakhe wayicima ngengozi inkqubo32? Ndingathanda ukuva malunga nayo. Kwaye nokuba ufuna ukuhlala ubukele, ndiza kuthumela amanye amanqaku apha.
Unokucofa nje kuyo kwaye ukuba ufuna ukubhalisa, ndiza kwenza amanqaku ambalwa veki nganye, ke kufanelekile ukuba oko. Ke enkosi kwakhona kubafana ngokubukela. Ndizokubona kwelizayo. makulunge kuwe
Ndiyikhupha njani inkqubo engazukukhupha?
Ungazikhupha njani iiNkqubokwi Windows 10 OkoAwuyi kukhipha
Cofa kwiMenu yokuQala, ebekwe kwikona yasekhohlo yeWindows yakho.
Khangela 'Yongeza okanye ususeiinkqubo”Emva koko ucofe iphepha lezicwangciso.
Fumana ifayile ye-Inkqubouzamakhipha, nqakraza kuyo kanye kwaye ucofe 'Khipha”.
Kulungile wonke umntu, hey Gamer Z ngesifundo sam sokuqala sokufundisa okanye le imalunga nendlela yokufaka uHamachi ngoku.
Kukho abantu abangakwaziyo, abangaqondiyo, ukuya kwiiNkqubo kunye neeMpawu kwaye ke baya kuzama ukucima nayiphi na into II ebinakho ukuyenza, kodwa kukho abantu abathile abangakwaziyo, abangakwaziyo, ke ndiyabona ndinokucofa nje ekunene ukukhipha abantu abangafakiyo i-installer, iyeka ukuphendula ngale nkqubo ye-Microsoft ifumana yona ukuze uyifakele. Ndiza kuya kwi-HTTP inkxaso evela kwi-Microsoft Comm ndiza kunika ikhonkco kwinkcazo kodwa emva koko ufuna ukuyenza kwaye ucofe ewe kwaye izakulungisa ingxaki. Ke jonga ukuba oku kungasuswa ngokupheleleyo into endiyaziyo kukuba abantu abangakuthandiyo ukukhipha abasebenzi ngenxa yefayile ethile elahlekileyo kwaye bayityhila ngokungakhathali ukuze bayikhuphe kungoko ucofa kwindawo ekucetyiswa ngaphandle kokuba uyazi kakuhle into engalunganga. Kuya kufuneka ucofe kwinkangeleko ekhuthazwayo kwaye ukuba uneengxaki zokuyifaka kufuneka urhuqe isifakeli kwidesktop yakho kodwa andinangxaki yokufaka imozulu ethile malunga nokufaka into ethile cofa ekukhupheni, ukuze iqonde Ingxaki kutheni ingazukuyikhupha ukuba uhambe ngolu hlobo, ngokusisiseko ihamba kwirejista kwaye izame ukulungisa ukulungiswa ngoku, hayi linda siye kwipaneli yokulawula, isekhona kodwa xa sihlaziya kwaye sicima, kuthetha ukuba ayikho apha apha, ayikho kwikhompyuter yakho, ukuba sifuna ukuya emaphethelweni kwaye masikhangele i-hamachi oh hi jonga kwirejista ye-machi das ngokusisiseko yinkqubo nganye ekwikhompyuter yakho, ke ukuba Awunakuyifumana apha emva koko isuswe ngokupheleleyo kwikhompyuter yakho oyaziyo ngoHamach kwi khompyuter yakho ke makhe sijonge, le yiyo yonke iaudiyo ye-HD-audiowell bendijonge yonke into ngokukhawuleza kwaye ngendlela elula yokwenza oku Kukujonga iifayile zenkqubo yakho kodwa Into yokuqala Unokujonga izinto eziphambili ngokubaluleka, unokujonga iinkqubo kunye neempawu zakho, ukuba azikho, akufuneki zibekho kwikhompyuter yakho, kodwa singagqitha kwaye sijonge kwaye andiyiboni i-LogMeIn hamachi naphi na apha Isebenza ukuba ndiyabulela mhlekazi ngaloo nto Jonga ukuba oku kuncede ulutsha Ewe ingxaki ilungisiwe kwaye ewe kuko konke oko kuthetha ukuba uyisuse kwikhompyuter yakho.
Ukuba i-Launcher engafakwanga ayisebenzi, yenze ngale ndlela. Enkosi ngokubukela, ukuba oku kukuncedile nceda undazise ukuba ufuna ukubona amanqaku angaphezulu kokufundisa nceda undazise okanye ndiza kudlala kuwe
Ndiyinyanzela njani ukuba ndiyikhuphe usetyenziso?
Kwiifayile zakhoI-Androidifowuni, vula Useto.
Jonga kuIiappsokanye LawulaIzicelokwaye ukhethe ZonkeIiapps(ingahluka ngokuxhomekeke kwimodeli yefowuni kunye nemodeli).
Ngoku jonga iusetyenzisoofuna ukuyisusa. Awuyifumani? ...
Thepha iusetyenzisoigama kwaye ucofe ku Khubaza. Qinisekisa xa ukhuthazwa.
ravbg64 exe intsholongwane
Iveki okanye ndiyakhumbula into ethi xa ndifaka usetyenziso, imalunga neapp endandiyicelile imvume yokuba ngumlawuli okanye into engaziwayo endiyijongileyo, emva koko ndiye ndayiqaphela le nto isixhobo esikhulu kunye nabalawuli, emva koko ndacinezela ilapha ayinanto ethetha ukuba lo mfaki sicelo Ngaba ndiyayibona ngaphakathi into ebengezelayo ngoku ukuba ayifakwanga, susa uninzi lweengxaki zakho ukuba unyanisile kwaye ucinga ukuba oku kungasijika sijonge ezantsi, yiya kumagqabaza, undixelele zithini iingxaki zakho eziqhelekileyo kwifowuni yakho ye-Android okanye kwiLaptop
Ndisusa njani ukungavisisani kwikhompyuter yam?
Yiya ku C: Abasebenzisi igama lomsebenzisi AppData lendawo Discord khipha. Ukuba ayisebenzi, landela imiyalelo kwikhonkco elingezantsi ukususa usetyenziso. Ukucima idatha yesicelo, vula ibhokisi yencoko yencoko ngokucinezela iqhosha leWindows kunye neqhosha R kunye. Chwetheza% AppData% kwaye ucofe iqhosha lokungena. Khangela indawo eyahlukileyo kwifolda kwaye uyicime.
Ungayicima njani i-discord cache ngaphakathi Windows 10?
Cima i-Discord cache 1 Yiya kwibhokisi yoPhendlo lweWindows, kwaye uchwetheze% appdata% 2 Vula ifolda yokuZula ye-AppData kwaye ufumane indawo eneenkcukacha ze-Discord 3 Cofa ekunene kwifolda kwaye uyicime 4 Buyela kwibhokisi yoPhando lweWindows kwaye uchwetheze% LocalAppData % 5 Khangela ifolda yokuNgavumelani kwifolda yakho yeAppData uze uyicime Izinto ezingaphezulu ...
Ngaba ikhona indlela yokwenza ukungaboni ngasonye ngokusondeleyo xa i ...?
Kuya kufuneka ucazulule nayiphi na ikhonkco le-gfycat, kwaye ujonge into ebethelelwe kuyo. Iya kwahluka kwi-API nganye yeDiscord, kodwa i-embed inevidiyo- & gt; ixabiso - & gt; Into ye-URL eya kuthi iqulethe i-mp4. Khuphela nje loo nto kwaye emva koko usebenzise ezinye izinto njengesiqhelo.
Kutheni le nto ukungavisisani kuhlala kubonakala kwikhompyuter yam?
Oko kuhlala kusenzeka kukuba abasebenzisi bayikhuphe i-Discord, kodwa usetyenziso ngandlela thile luhlala kwi-PC kwindawo engaziwayo yefayile. Xa abasebenzisi bezama ukucima i-Discord kwakhona, iPC ithi ifayile ayisekho kuloo ndawo, kwaye ngenxa yoko ayinakucinywa.